भिमेश्वरको मेयरको टिकटमा लफडा: जिल्ला उपाध्यक्षसहित ८ जनाको उजुरी ! - Kantipath
भिमेश्वरको मेयरको टिकटमा लफडा: जिल्ला उपाध्यक्षसहित ८ जनाको उजुरी !
दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको उम्मेदवार छनोटको विवादले उग्र रुप लिएको छ । हिजो बसेको एमाले दोलखाको जिल्ला कमिटी बैठकले ९ वटै पालिकाको प्रमुख र उप-प्रमुखको उम्मेदवारको टुंगो लगाएको थियो । दाेलखा एमालेकाे जिल्ला कमिटी बैठकमा जबर्जस्ती नाम लिष्ट पढेर निर्णय नगराई अध्यक्ष नर श्रेष्ठ हलबाट बाहिरिएको पत्रकार रमेश खतिवडाले सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी दिएका छन्।
सबैतिर ‘फ्रेस’ अनुहार भिमेश्वरमा मात्र ‘बासी’ अनुहार भन्दै दोलखा एमाले भित्र अन्तरसंघर्ष सुरु भएको एमालेका एक जिल्ला कमिटी सदस्यले भने। पार्टीले विवादको उचित समाधान नगरे अन्तरसंघर्ष, अन्तर्घातमा बदलिने शंका बढेर गएको उनले बताए ।
पत्रकार खतिवडाका अनुसार अन्यत्र सबैतिर नयाँ अनुहार उतार्दा भीमेश्वर नगरपालिकामा स्वार्थसहित पुरानै मेयर र उपमेयर पुरानै अघि सारेकाे भन्दै भीमेश्वरका मेयर आकांक्षी हरिवंश चाैलागाई, राजेन्द्र मानन्धर, प्रविण प्रधान साथै उपमेयरका आकांक्षी डा.जानुका न्याैपाने, मेनुका सुवेदी, रुपा शाही भुजेल, पूर्णिमा खरेल र सीता केसीले एमाले प्रदेश कार्यालयमा बुधबारकाे पार्टी निर्णय विरुद्ध केही बेर अघि उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
खतिवडाको भनाई पुष्टि हुनेगरि मेयरका बलिया दाबेदार तथा वडा नं ४ का निर्वाचित अध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रवक्ता हरिवंश चौलागाईंले उक्त पोस्ट शेयर गरेका छन् । एमालेले साबिककै मेयर भरत केसी र उपमेयर कमला बस्नेतलाई दोहोर्याउने निर्णय गरेको थियो । विश्वस्त स्रोतका अनुसार जिल्ला अध्यक्ष श्रेष्ठले केसीलाई जिल्ला अध्यक्षमा जिताउन गरेको सहयोगको गुण तिरेका हुन् । एमालेले जिरीको उपमेयरमा पनि कृष्णमाया बुढाथोकीलाई दोहोर्याएको छ ।